Maalinta: 27-ka July, 2018
Samsunspor Taageerida Maalinta Guud ee Ciyaarta
Taageerayaasha Samsunspor waxay aadi doonaan guriga ay wada ciyaarayaan kooxaha wata gaadiid bilaash ah. Duqa Magaalada Caabudwaaq Kaahin wanaagsan wuxuu u dirayaa Fanaaniinta Samsunspor Samsun Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn SAMULAŞ A.Ş. iyo Naadiga Samsunspor. [More ...]
Dib-u-dhiska Wadooyinka waaweyn ee Eskisehir
Kooxda Dayactirka Wadooyinka Magaalada Caabudwaaq iyo Qeybta Dayactirka ee Dowlada Hoose ee Eskişehir, dhamaan magaalada ayaa howshooda si xawli ah u wada. Kooxo habeenkii seegaya habeenkii, Cengiz Topel Street iyo Uludag [More ...]
Tirada Rakaabka ee Kordhinta Madaarada
Sida laga soo xigtay xogta 2018 ee Agaasimaha Guud ee Hay'adda Maareynta Duulimaadka Gobolka, waxaa kor u kacay tirada rakaabkii garoonka 54 marka la barbardhigo isla muddadaas sannadkii hore. Kororka ugu sareeya waxaa lagu arkay Cappadocia Airport marka loo eego 98. [More ...]
Wasiir ku-xigeenka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Kaabayaasha ee İSKURT, 27 Luulyo 2018 wuxuu booqday Agaasinka Guud ee TCDD Jimcihii. Enver İSKURT, oo yimid TCDD markii ugu horreysay ka dib markii loo magacaabay wasiir ku-xigeen, [More ...]
Hay'adda qiimeynta deynta JCR Eurasia Rating waxay dib u eegis ku sameysay qaab dhismeedka isku xirka ee Kardemir iyo kaabayaasheeda iyo qulqulka lacagaha ee suurtagalnimada bond, iyagoo ku qiimeeya heerka sare ee heerka maalgashiga iyo [More ...]
Zonguldak-Karabük Iyadoo jawaab ka timid TCDD oo ku socotay duulimaadyo xun
Ilbidhiqsiyo muwaaddinnimo ah ayaa waydiiyey Cicibaşoğlu adeegga tareenka oo aan ku filnayn… TCDD ayaa ugu jawaabtay sidii iyagoo qirtay “Wagons kuma haboona goobta yolculuk Inta tareenada laga sameeyay inta u dhaxaysa Zonguldak-Karabük ay isu beddelaan dhibaato dhameystiran, [More ...]
Koçbay Balıkesir Station Looga Helay Waqtiga Baarista
TCDD 3. Maareeyaha gobolka Selim Koçbay, wuxuu socda dhismaha mashruuca diritaanka ee the Menemen-Bandırma Balıkesir Gar si uu u kormeero shaqada. Koçbay'a waxay baarayaan shaqada ay ka qabteen goobta, shirkadda qandaraaslaha ee dhismaha dhismaha ee Balikesir [More ...]
Daahfaahinta Macdanta Biriijka ee Tunisia waxay keentay Fudud
Tuniisiya, sababtuna tahay taxaddar la’aanta mashiinka bilaa dhaqdhaqaaqa mashiinka, rakaabkii tareenka ayaa qayliyay oo ku noolaa daqiiqado cabsi leh. Tobaneeyo dad ah ayaa ka soo laabtay qarka musiibo subaxnimadii hore ee Tuniisiya. In albaabada la xidho inta uu tareenku socdo [More ...]
Duulimaadyo Dheeraad ah ee Duulimaadyada Tareenka ee Zonguldak-Karabuk
Republic of Turkey General Directorate of Turkish Tareennada State (TCDD), ayaa lagu helay in description ee cufnaanta sameeyay intii u dhexeeysay tareenada gokcebey-Çaycuma-Karabük-Zonguldak. Wargayska Pusula oo ka jawaabaya wararka ku saabsan tirada tareennada iyo tirada tareennada [More ...]
CBU Xarumaha Waddooyinka ee Campus Wadaa
Marka la eego baaxadda dhismaha wadada iyo shaqooyinka dammaanad qaadista ah ee laga fuliyey gobolka oo dhan, Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa waxaa ka go'an fidinta wadada si loo hubiyo safarka aaminka ah ee muwaadiniinta ee ku aaddan wadada Cusmaaniyada ee xaafada degmada Yunusemre. [More ...]
RayHaber 27.07.2018 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 27.07.2018 ee nidaamkayaga.
Waddada Sakarbaba waa la dayactiray
Magaalada Sakarya ee Magaalada 'Magaalada waa laguu cusbooneysiinayaa' iyada oo halku-dhigga lagu bilaabay howsha dayactirka wadooyinka. “27 waxaa lagu qaban doonaa Jimcaha, Luulyo inta u dhaxaysa 21.00 iyo 6.00 kana socota Adnan Menderes Street. [More ...]
8 oo xayiray xayiraadda tareenka ee Karaman
Tareen xamuul oo xamuul ah ayaa ku dhacay adhiga isaga oo maraya heer isgoyska ah ee Karaman. Sida ay sheegayaan wararka la helay, dhacdada ayaa ka dhacday magaalada Sudura afternoon shalay gelinkii dambe 59-sano jir ah RY daaqsinta xoolaha ayaa u soo gudbay adhiga dhanka tareenka safka. [More ...]
Duqa magaalada Cayirova Sevki Demirci, Akse Neighborhood Construction ayaa ka biloowday dhismaha Beerta Nabada oo dib u eegis lagu sameeyay. Waxaa lagu dhisay kun mitir murabac ah oo isku wareeg ah, 7 waa musharraxa ugu weyn Kocaeli. mashruuca [More ...]